Umthengisi kunye noMthengisi | Sheerfond
Uhleli eofisini ecocekileyo, kwidesika yakho, kukho umnini wepenisi olungileyo, onokugcina iofisi yakho, ahlawulise iselfowuni, kwaye unokusetyenziswa njengendawo yokuma kwifowuni yakho. Iyakukhanya, ikwenze ufune ukuba umxholo ubonakaliswe uyakhanya eofisini, kwaye uya kutshintsha ngemibala eyahlukeneyo, ukuze abahlobo abakungqongileyo balinde ukuyihoya, enomdla ngakumbi, ngaba iyawenza wonwabe ngakumbi umsebenzi wakho , kwaye wonwabele ubumnandi bobomi ngelixa usebenza. Khawuleza ucebise ...
Uhleli eofisini ecocekileyo, kwidesika yakho, kukho umnini wepenisi olungileyo, onokugcina iofisi yakho, ahlawulise iselfowuni, kwaye unokusetyenziswa njengendawo yokuma kwifowuni yakho. Iyakukhanya, ikwenze ufune ukuba umxholo ubonakaliswe uyakhanya eofisini, kwaye uya kutshintsha ngemibala eyahlukeneyo, ukuze abahlobo abakungqongileyo balinde ukuyihoya, enomdla ngakumbi, ngaba iyawenza wonwabe ngakumbi umsebenzi wakho , kwaye wonwabele ubumnandi bobomi ngelixa usebenza. Khawulezisa ucebise ngemveliso elungileyo kubathengi kunye nabahlobo bakho abathandekayo! Okubaluleke ngakumbi, khawuleza uze uzibonele ngokwakho.
1. Umsebenzi wokugcinwa kweDesktop: ungabeka iipeni, iimela, iirula, ii-stapler, ii-earphone, iintambo zokutshaja, kunye nezinye izinto zeofisi kunye neemveliso zombane kwibhokisi yokugcina, kwaye awusoze uyibone idesika enesidima.
2. Umsebenzi wokutshaja ngaphandle kwamacingo kwifowuni: Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-10W, akukho sidingo sokwenza nawuphi na umsebenzi ukutshaja ifowuni, ubeke ifowuni kumnini wemveliso yefowuni, kwaye ubize ifowuni yakho ngokukhawuleza, efanelekileyo, efanelekileyo, okanye efanelekileyo.
3. Vumela i-logo yakho ikhanye, umbala wayo uhlala utshintsha, unokutsala amehlo abahlobo, ubona ilogo yakho, intengiso ebomini.
4. Umsebenzi wesiphatho sefowuni esiphathwayo, ifowuni ephathekayo ibekwe kwisiphathi, ikhulule izandla zakho kwaye inike izandla zakho inkululeko engakumbi.
5. Le mveliso isebenzisa zonke izinto ezonakalisiweyo zokhuselo lokusingqongileyo kwe-PU, ezinobuhlobo kwindalo esingqongileyo nezisempilweni emzimbeni.
6. Uyilo lwemveliso luhle kakhulu.
Isicelo esingundoqo semveliso:
(1) Izipho zabahlobo kunye neshishini, izipho zokwazisa.
(2) Izinto zokubhala ezi-ofisini
Inkqubo Production intshayelelo:
Inkampani yethu ipasile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001. Izinto zeemveliso ziye zavavanywa ngokungqongqo. Iimveliso zilawulwa ngokungqongqo ngexesha lenkqubo yemveliso. Ukuveliswa kweemveliso yi-100% eyenziwe ngezandla. Imveliso nganye kufuneka ivavanywe ngaphambi kokushiya umzi-mveliso ukuqinisekisa ukuba abathengi bayayifumana Yonke imveliso evelileyo iyimveliso efanelekileyo.
Le ikwayimveliso yethu enelungelo elilodwa lomenzi, vumela isayensi kunye netekhnoloji isebenze ubomi, vumela izinto ezintsha zizise ulonwabo
Intambo ye-IPone, TYPE-C Cable, intambo encinci, izikhonkwane zeeselfowuni
Ukunikezelwa kweShishini elitsha, isipho sokukhuthaza, izipho ze-frer
ubungakanani bemveliso 180mm * 100mm * 115mm
ubunzima bemveliso 250g
ubungakanani bokupakisha Ubukhulu: 190mm * 110 * 115mm
inani / ibhokisi nganye
ubunzima / ibhokisi nganye
Egqithileyo Indawo yokugcina izinto
Okulandelayo: 3in1 iphedi yemouse yokutshaja ngaphandle kwamacingo
Imemori yokuBhala yeepeni
Iipeni zePen Design Design
Ipeni Holder Kuba Desk
Ipeni yokubamba isikhumba
Ipeni ibambe ishaja engenazingcingo
Ifowuni engenazingcingo yeTshaja yePenisi
Imagnethi yemagnetic iphedi-ngwevu